LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာအနှစ် ၂၀ ပြည့်စုံသည်မီးခိုးရောင်ခေါင်မိုးများနှင့်မည်သို့ဆင်တူသနည်း။
13 / 05 / 2021 13 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 376 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts နာရီမျှော်စင်, ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, .ရာဝတီ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, မင်္ဂလာပါ, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား, YouTube ကို
ဒီနွေရာသီပါပဲ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စုံကသူတို့စုပေါင်းထားသော ဦး ထုပ်ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်သဲစိမ်းလန်းသောခေါင်မိုးများဖြင့်သုတ်သင်ခဲ့သည် - သို့သော်၎င်းတို့ကိုမီးခိုးရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်လက်ရှိ Hogw နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်artပိုကောင်းတာပေါ့။
ဒါကမေးသောမေးခွန်းပါပဲ ကျောက်စိမ်းသူသည် Photoshop အနက်ရောင်မှော်အတတ်တစ်မျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း သူတို့ကိုစတိုင်မှသူတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts နာရီမျှော်စင် နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်.
၎င်းသည်သဲအစိမ်းရောင်ခေါင်မိုးများကိုလဲလှယ်ခြင်းပါ ၀ င်သည် classic 4709 Hogw ၏ဗေဒarts Castle, 4730 လျှို့ဝှက်ချက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်စသည် - မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်အဘို့, အသစ်ပြုပြင် Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလားဆောင်ပုဒ်ပိုမိုလွယ်ကူ (နှင့်စစ်မှန်) ဒီဇိုင်းကိုက်ညီ။
သို့သော် Ashnflash လည်း switching အားဖြင့်တစ် ဦး ခြေလှမ်းနောက်ထပ်သွားပြီ အသစ်အစုံ'' ရဲတိုက်၏စပီးများအတွက်အသုံးပြုသော Unikitty ဦး ချိုဒြပ်စင်များ - ၂၀၁၈-၂၀၂၀ မော်ဒယ်များမှအသုံးပြုသောသဲစိမ်းလန်းသောနှင်းလျှောတိုင်များအတွက်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သောထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းစတိုင်နှစ်ခုအကြားပြောင်းလဲမှုကိုအမှန်တကယ်ရောင်းရန်အထောက်အကူပြုသည်။
အပေါ်ကဗီဒီယိုကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင် YouTuber ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူရလဒ်များကိုအပြည့်အဝမြင်နိုင်သည်။ မော်ဒယ်သစ်များ၏အပြည့်အဝသဘောသဘာဝသည်အလျားလိုက်ဖော်ပြရန်သက်သက်သာဖြစ်သောကြောင့်ပြန့်ကျဲနေသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုနှင့်အတူမကြာသေးမီက Hogw ၏ဗေဒartအိမ်ခေါင်မိုးကိုပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းသည့်အရာက၎င်းတို့အားအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတူတကွပေါင်းစပ်ရန်များစွာကြိုးပမ်းသည်။
တချို့သောအဓိကပြုပြင်မွမ်းမံနေဆဲ adjoin ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း ကျန်သူများနှင့်မူ၎င်းတွင်၎င်း၏မဟာခန်းမအောက်၌မြေအောက်hasရိယာရှိသည် (၎င်းကိုယ်တိုင်နှင့်ကိုက်ညီရန်ပြန်လည်နေရာချရန်လိုအပ်သည်) ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ).
သို့သော်ဤအစုံသည်လုံးဝ modular ဖြစ်သောကြောင့်လျှို့ဝှက်ချက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကိုညီမျှခြင်းမှလုံးဝဖယ်ရှားခြင်းသည်သီအိုရီအရသင့်လက်ရှိ Hogw သို့အထက်မြေပြင်ကဏ္newများထပ်မံထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်arts ကို setup ကို။
ထို့အပြင်သဲအစိမ်းရောင်ခေါင်မိုးများနှင့် Unikitty horn element များကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးပေါ်ထွက်လာသည့်အရာများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်သည်။articularly သောကြောင့် နည်းပညာ pin connection သည်လက်ရှိ Hogw ကဲ့သို့တူညီသောအကွာအဝေးကိုခံယူထားသည်arts စုံ။
၂၀ နှစ်ပြည့်သည့်အခါသင်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အစောပိုင်းကဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည် Brick Fanatics လာမည့်နေ့ရက်များအတွင်းလိုင်း -up ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကန ဦး ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
← LEGO ၎င်း၏မြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ် classic 2021 ရဲ့အတွက် baseplates CITY အစုံ
ဘာကြောင့် Just2good သည် LEGO သံအမတ်ကွန်ယက်မှထွက်ခွာခဲ့သည် →